Wararkii: Jan 18, 2007
Ciidamada Xukuumada Ethiopia oo Faaruqiyey Dekeda iyo Airport magaalada Muqdisho
Cali daacuun: Hadii hadhuubku buuxsamo Lagama celin karo inuu daato.
Gudoomiyaha Baarlamaanka DFKMG oo Ku gacan Sayray Xil ka Qaadistii....
Kulan Lagu Aasaayey Guddiga Xidhiidhka Saaxiibtinnimo Ee Suuriya Iyo Soomaaliya Oo Ka Dhacay Magaalada Dimishiq.
[Clan Divisions Threaten Somalia Government] - VOA
ama Dhegeyso [Warbixintii Ryu ee VOA]
Ergeyga QM Ugu Qaybsan Arimaha Somalia Mr. Francois Fall Oo Maanta Soo Gaaray Magaalada Muqdisho Ayaa kulamo Kala Gooni Gooni ah La yeeshay Madaxweyne c/laahi yuusuf iyo Qeybaha kala duwan ee bulshada Rayidka ah.
Jan 18, 2007: Waxaa maanta soo gaaray magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ergayga qaramada midoobay ugu qaybasan arimaha soomaaliya Francois Fall isagoo kulamo kala gooni gooni ah la yeeshay madaxaweyne c/laahi yuusuf iyo ururada kala duwan ee bulshada rayidka ah .
Mr. Fall ayaa kulan saacado qaatey la yeeshay Madaxweynaha DFKMG Somalia C/laahi Yuusuf Axmed oo ay isla soo qaadeen arimo dhowr ah oo ku aadan sidii nabad loogu soo dabaali lahaa dalka soomaaliya ,islamarkaana dardar galin loo gelinj lahaa nabada iyo xasiloonida dalka soomaaliya iyo keenista ciidamada nabad ilaalineed ee la keenayo Somaliya, sida ay suurta gal u tahay in dowladda Somaliya in xubno muuqda laga siiyo qeybaha kala duwan ee bulshada iyo arimo kale oo ku aadan xilka qaadistii shalay lagu sameeyay Gudoomiyihii Baarlamanka Somaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan oo uu ku tilmaamay mid lagu degdegay .
Mr .fall ayaa sidoo kale soo hadal qaaday in ciidamada Ethiopia inaysan suurto gal aheyn in ay sii joogaan gudaha Somaliya balse ay ka baxayaan dalka marka ay yimaadaan ciidamada Afrikaanka ah oo lagau wado inay soo gaaraan dalka .
Mr. Fall ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay xariggii dhowaan loo gaystay idaacadaha qaarkood ee magaalada Muqdisho, isagoo sheegay in arinkaasi uu cambaareeynayo, waxa uuna saxaafadda kula dardaarmay in ay ilaaliyaan qawaaniinta shuruucda saxaafadda ayna ka qeyb qaataan dib u dhiska dalka, iyo nabad soo celinta dlka Soomaaliya.
Mar uu ka hadlayay hay'adaha samafalka ee Q.M ayaa waxa uu sheegay in hay'adaha samafalka ee ku sugan magaalada Nairobi ay dhamaan tood u soo guurayaan caasimadda Somaliya sida ugu dhaqsiyaha badan, mana jirto sabab hadda ay ugu sii nagaadaan Nairobi, taasina ay soo dedejin karto imaatinkooda hadii aa nabada xoojisaan .
Mr. Fall ayaa waxa uu sheegay in ciidamo caalami ah oo ka socda Q.M ay imaan doonaan gudaha dalka Somaliya, kuwaasi oo ka qeyb qadanaya xasilinta iyo amaanka ku soo celinta dalka soomaaliya .
Dhanka kale Ergeyga Q.M ugu qeybsan arimaha Somaliya ayaa kulanka Madaxweynaha ka dib waxa uu Hotel Pradise kula kulmay Qeybaha bulshada rayidka oo uu kala hadlay ka qeyb qaadashada geedi socodka nabadda Somaliya isagoo qaybaha kala duwan ee buslhada ku booriyey inay si wadajir u qabtaan soo celintii kala damabayntii iyo nabadii dalka soomaaliya isalamarkaana ay muujiyaan dadaalo dheeri ah oo ay uga qeyb qaadanayaan nabada .
:: Faallo: Cabdullaahi Yuusuf oo Laga Sugayo 24 saacadood Gudahood in uu ku Jawaabo... Akhri..
Maraykanka oo Cambaareeyey Xil Kaqaadistii Guddoomiyaha Baarlamaanka DFKMG....
Dublomaasi sare oo Maraykan ah ayaa cambaareeyey cod bixintii baarlamanka Kumeelgaarka ah ee Soomaaliya uu xilka uga qaaday guddoomiyaha baarlamaanka Shariif Xasan Sheikh Aaden. Caawiyaha xoghayaha Arrimaha dibada ee Maraykanka u qaabilsan arimaha afrika, Jendayi Frazer, waxay tiri arrintani waxay dhaawac ku tahay isku dayga in si nabad gelyo ah lagu xalliyo kala tafaraaruqa dalka dagaalku halakeeyey. Sidaas waxaa warka ku bilaabay Raadiyaha Maraykanka ee VOA.
VOA waxa uu intaas ku daray: Baarlamaanka Kumeelgaarka ah ee Soomaaliya oo ku shiray Baydhabo waxa uu si aqlabiyad ah ugu codeeyey in xulka laga qaado Shariif Xasan. Shariif Xasan waxa uu sannadkii hore isku deyey in heshiis nabad gelyo ay wada gaaraan DFKMG iyo Dhaqdhaqaaqa Islaamiga ah ee dalka, oo markaas xukumey casimada Muqdisho.
Ciidamda Itoobiya ayaa bishii hore waxay galeen Soomaaliya iyagoo gacan siinaya DFKMG, kuwaas oo Muqdisho iyo in badan oo dalka ah ka saaray dagaalyahainiintii Islaamiyiinta ahaa, waa sida warka VOA u dhigay'e. Ilaa xilligaas saraakiisha Maraykanku waxay ugu baaqayeen madaxda dawladda Soomaaliya in ay la xiriiraan kooxda Soomaaliya ee la jebiyey si la isugu dayo in la dhamaystiro colaada 16ka sano ah.
Caawiyaha xoghayaha Arrimaha dibada ee Maraykanka u qaabilsan arimaha afrika, Jendayi Frazer, waxay tiri go'aanka xilka looga qaaday afhayeenka barlamaanku waxay dhaawacaysaa isku daygii dib u heshiinta garabyada Soomaaliya.
Wiil Soomaali ah oo dhex maraya labo Taangi oo Itoobiyaan ah magaalada Muqdisho Jan 15, 2007. Sawirka: VOA
"Calaamadda ah in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ay taageereen in meesha laga saaro isaga (shariif Xasan) waa mid ka soo hor jeeda dareenka dib u heshiisiinta," ayey tiri, waxayna intaas ku dartay "Sidaas daraadeed waxaan kula talineynaa dawladda, ka taageerayaal ahaan dawladda, in ay muujiyaan wax taas ka duwan." Waxaana VOA intaas ku daray in taas oo jirta in Maraykanku sii wadayo taageeradiisa DFKMG.
Frazer waxay hadalkaas ka jeedisey gole looga hadlayey arrimaha Soomaaliya oo ah xarunta Istaraatiijyada ito daraasada Caalamiga ah ee Washington.
Dhanka kale VOA waxa uu warbixin dheer ka bixiyey xaaladda guud ee Soomaaliya. Raadiyaha oo arrintaas ka hadlaya waxa uu yiri: Dalka Soomaaliya, dhaqdhaqaaqii dalka mar xoogga weynaa ee Islaamiga ahaa jabkiisii waxa uu culays aad u xoog weyn dusha ka saaray dawlada secular-ka (cilmaaniga) ah ee ay qaramada Midoobey aqoonsan tahay si ay u hesho taageerada shacabka, una dejiso dalka. Dhegeyso [Warbixintii Ryu report ] ama Akhri [Clan Divisions Threaten Somalia Government].
Kufsigii ay Ciidanka Itoobiya u Geysanayeen gabdhaha Soomaaliyeed oo sii socda...
Dhanka kale Hay'adaha reer Galbeedka ee ku sugan Bariga Kenya ayaa waxaa wararku sheegeen in ay soo gaarayaan warar isasoo taraya oo tibaaxaya kufsi ay Ciidamada Xabashida ee soo galay Soomaaliya u geysteen gabdho Soomaaliyeed. Mid ka mid ah warbixinadaasi waxay sheegtay in dad soo gaarey Dhoobley ay sheegeen in Ciidamada Itoobiya ay kufsi u geysteen gabdho Soomaaliyeed. Waxaana warbixintu sheegtay in nacaybka u dhexeeya labada dal ee Soomaaliya iyo Itoobiy auusan ahayn mid qarsoon.
Ilaa hadda wax war ah oo arrintaas ku saabsan lagama maqal DFKMG, in kasta oo Dadka Soomaaliyeed ay rumaysan yihiin in arrintaan adduunka oo dhammi ka hadlayo aysan madaxda DFKMG ahi ka hadli doonin.
Toddobaadkii hore ayey ahayd markii ay soo baxday warbixintii in shan ka tirsan ciidamada Itoobiya ay kufsadeen qof dumar ah oo Soomaaliyeed... EEG WARBIXINTII HORE
Waxaa maalintii Talaadadii ahayd uu Raysal wasaaraha xukuumada Ethiopiya Melez zanawi uu ku dhawaaqay in ciidamiisu ay kabaxayaan dalka Somaliya oo aysan sii joogayn isagoo sheegay in uu waqtigii loo qabtay ay ku ekayd oo kaliya Maalinta taladadii ah oo ku beegnayd maalintii Jan 16, 2007 isagoo intaa ku daray inay hada udiyaar garoobayaan sidii ay uga bixi lahaayeen guud ahaan dalka soomaaliya .
Raysal wasaaraha Xukuumada Ethiopiya ayaa waxa kale oo ay intaa ku dartay inaysan ciidamo Africanka ah aysan sugi doonin iyadoo loo malaynayo inay ku Hungoobeen oo maalmihii lasoo dhaafay uu culays kaga yimid caalamka islamarkaana xooga lagu saaray in lasoo dedejiyo sidii ay ciidamo African ah loo heli lahaa.
Ciidamada Ethiopiya ayaa habeenimadii Arbacadu soo geleysey faaruqiyey fariisimo dhowr ah oo ay ka deganaayeen magaalada muqdisho islamarkaana ku wareejiyey ciidamo soomaali ah , dekeda iyo airporka magaalada Muqdisho iyagoo isaga baxay saldhigyadaas waxana warar laga helayo isla goobahaasi ay sheegayaan in ciidamada Ethiopiyanka ah ee ka baxay meelahaasi inay tageen daafaha maagalada muqdisho sida siinka dheer ee wadada isku xirta afgooye iyo muqdisho iyo dhinaca xeradii hiilweyne.
ka bixitaanka ciidamada xukuumada Ethiopiya ee Garoonka iyo Dekeda ayaa kusoo beegmaya xili ay maamulka cusub ee gobolka banadiir ku dhawaaqeen in ay ciidamada Ethiopya iskaga baxaan gudaha magaalada muqdisho islamarkaana ay arintan oo aad ay usoo dhoweeyeen wax garadka ,aqoonyahanka ,xeeldheerayaasha siyaasadeed iyo bulshada inteeda kaleba.
Siyaasiga soomaaliyeed ee cali maxamed axmed (cali daacuun) oo indhowaaleba hadafkiisa siyaasadeed ku cabirayey halista siyaasadeed ee dalka marayo iyo sida talo ahaan ay ula muuqataba iyo ismaandhaafka siyaasadeed ee ku kala dhex jira masuulyiinta ugu sar saraysa dowlada kmg ah ku cabairaya fekerkiisa ayaa ka yiri sidatan ;
''Hadii haruubku buuxsamo lagama celin karo inuu daato ,noolaha waxaa laga rabaa inuu cabiro weelka uu wax ku shubanayo ,si uu badbaado in siyaasadiisu dhulka ku daadato ,tusaale waxaan noqon kara dowladii lagu soo dhisay Jabuuti Gobolka carta waxay ku dheeliday khilaaf soo kala dhex galay madaxdii ugu sar saraysay Taasoo loo arkay wasiirkii koowaad Dr, cali khaliif galaydh hadii uu meesha ka baxo oo lagu guulaysto radistiisa inay dowladu shaqayan doonto lagana heli doono aqoonsi Ethiopia ,nasiib darro radistii cali khaliif waxay keentay in in TNG ay si fiican u burburto dhaxalkeediina in shirkii khartoum ay ka dhalato looma dhamayn shirkii jabuuti ee waa in shir cusub hada la abaabulaa oo laysugu yimaadaa dalka kenya ''.
Waxuu kaloo intaas ku daray ''sida ii hada muuqata hadii la rido gudoomiyaha baarlamaanka ,waxay noqon doontaa hal bacaad lagu lisay waxii lagu soo dhisay dalka kenya ,ma qabo in reer galbeedka iyo jaamacada carabtu inay ku farxi doonaan ridista hada la qabanqaabinayo ee ku salaysan gudoomiyaha baaralamaanka ''.
Cali daacuun ayaa intaas sii raaciyey '' waxaan talo ahaan usoo jeedin lahaa Madaxweynaha dowlada kmg soomaaliyeed inuu ka fiiro u yeesho shaqaaqada ka socota magaalada baydhabo ,wax kasta oo khilaaf soo kala dhex gala TFG da waa in lagu dhamayaa wada hadal ,hadiise ay noqoto awood ,waxii kasoo baxa waxba yaan layga siin''.
Saacado intii aysan ka soo wareegin markii ay Baarlamaanka DFKMG ee Baydhabo u codeeyeen in xilka laga qaado guddoomiyaha Baarlamaanka Shariif Xasan, ayuu arrintaas ganafka ku dhiftay Shariif Xasan Sh. Aaden oo safar ku maraya dalal ka tirsan Qaarada Yurub.
"Baarlamanka Soomaaliya sida la ogyahay ma ahan xor go'aan gaari kara" ayuu yiri Shariif Xasan oo intaas raaciyey "waa mid lahaysto, baarlamanka ma ahan mid xil dhiibi kara ama qaadi kara".
Warkii xil ka qaadista hoos ka akhri...
Gudoomiyeha Baarlamaanka oo xilkii laga xayuubiyay....
Maanta waxaa soo xaadiray kulanka baarlamaanka 192 xildhibaan oo 183 in kalsoonida kala laabteen gudoomiyaha baarlamaanka, halka 9-diideen, iyadoo Boqore uu sheegayin aysan jirin cid ka aamustay. AKHRI WARKA OO DHAN...
Waxaa lagu qabtay magaalada Dimishiq kulan lagu aasaasayey guddi loogu magacdaray , gudiga xidhiidhka saaxiibtinnimada Suuriya iyo Soomaaliya, kulankan oo uu soo qabanqaabiyey safiirka Soomaaliya Mudane Maxmuud Muuse Tarey ayaa waxa loogu talo galay sidii loogu xoojin lahaa xidhiidhka labada dal ee Suuriya iyo Soomaaliya.
Waxaana ka soo qayb galay kulanka xubno hore uga ahaan jiraya safiiro Soomaaliya oo uu ka mid yahay safiirkii hore ee Suuriya u Fadhiyey Muqdisho, mudane Naciim Qaddaax , mudanayaal ka tirsan golaha shuurada ee dalka suuriya oo ay ka mid yihiin Cadnaan Dakhaakhina, Dr. Maxmed Al-Xabash, iyo Bahaa�addiin, iyo Xoghayaha Safaaradda Soomaaliya ee dalka Suuriya Mudane C/raxmaan C/qaadir Shiikh Maxmuud.
Sida la sheegay gudigani waxa ay ka shaqayn doontaa sidii kor loogu qaadi lahaa xidhiidhka ka dhexeeya labada dal,iyo sidii dhinaca ganacsiga, waxbaradhada iyo iskaashiga siyaasadeed loo xoojin lahaa.
Waxaa iyana laysla soo qaaday sidii looga wada shaqayn lahaa ilaalinta qarannimada ummadda carbeed iyada oo laga shiidaal qaadanayo heshiisyadii hore ay wadamada carbeed u gaadheen.
Waxayna sheegeen labada dhinac in arrimahan lagu fulinayo iyada oo loo marayo in la qabto wacyi galin loo qabanyo shacabka laba wadan.
Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Suuriya Maxmuud Muuse Taray ayaa isaga oo saxaafadda u warama sheegay in ay tahay gudigani tii ugu horaysay ee laba wadan oo carbeed dalka Suuriya iskula afgartaan in ay talaabadan wada qaataan.
Faafin: Jan 18, 2007
Gudoomiyeha Baarlamaanka oo xilkii laga xayuubiyay...
Golaha baarlamaanka federaalka kmg-ka Soomaaliyeed ayaa maanta xilkiisii ka qaadey gudoomiyihii golaha baarlamaanka Shariif xasan Sheekh Aaden, waxaana magaalada Baydhabo ee cod ku... Akhri.... 17/1
WAR MURTIYEED: Jaaliyadda Reer Xaaji Suleymaan ee Yurub & Waqooyiga Ameerika waxay soo saareen Akhri... 17/1
SomaliGalbeed: Dagaallo ciidammada gumaysiga lagu naafeeyay.
iyo Dadwayne uu cadowgu ku xidhxidhay meelo kala duwan.... Xorriyo 16/1
Shariif Xasan Sheekh Aadan "Maanta maalin ka xun ma soo marin Soomaaliya"
Guddoomiyaha Baarlamaanka DFKMG iyo wafdi uu hoggaaminayo booqday Belgium ayaa Akhri.. 16/1